४६ करोड ठगीको उजुरीमा एमाले नेता पक्राउ - Baikalpikkhabar
४६ करोड ठगीको उजुरीमा एमाले नेता पक्राउ
काठमाडौं, असोज १८ /
नेकपा एमालेका पूर्वसांसद तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले ठगी र रकम हिनामिनाको आरोपमा तामाङलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो । तत्कालीन सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडमा निक्षेपकर्ताले राखेको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तामाङलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ ।
को हुन् इच्छाराज तामाङ ? के के गरेका थिए ?
नेकपा (एमाले) बाट राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेका तामाङ सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । उनलाई एमालेले संविधानसभा सदस्य नै बनाएको थियो । संसदको अर्थसमिति सदस्य मनोनित भएका तामाङले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया), २०७२ मा आफ्नो स्वार्थअनुकूलका एक दर्जनबढी संशोधन हालेका थिए । यसरी उनले राजनीतिको आडमा देशको संवेदनशील क्षेत्रको कानून तर्जुमा प्रकृयामै हस्तक्षेप गर्ने हैसियत बनाएका थिए ।
इञ्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका तामाङले उनले घरजग्गा कारोबारदेखि पूँजीबजार, बैंक र सहकारीसम्मका क्षेत्रमा हात हालेका थिए । २०५७ सालमा सिभिल क्रेडिट एण्ड सहकारी संस्था खोलेका तामाङको आर्थिक क्षेत्रमा संलग्नता दोस्रो जनआन्दोलनपछि अस्वाभाविक ढंगले बढेको थियो ।
व्यापारिक साम्राज्य विस्तार गर्न खोजेका तामाङ अधिकतर समय विवादित रहे । तर, राजनीतिक आड र दबाबमा जोगिइरहे । सिभिल ग्रुपका विभिन्न संस्था र कम्पनीमा बचत रकम जम्मा गरेका ३२ सय सर्वसाधारणको ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम डुबाएर उनी फरार रहेका थिए । उनले सबैभन्दा धेरै ठगी सिभिल सहकारीबाटै गरेका थिए । राजनीतिक आडभरोसाकै कारण उनीविरुद्ध केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मले बचतकर्ताको हितमा कदम चालेको थिएन । नियामक सरकारी निकाय पनि मौन थियो ।
उनले सिभिल सहकारीको अध्यक्षमा मामाससुरा केशवलाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न सफल भएका थिए । सिभिल ग्रुपको नेतृत्वमा आफू र आफन्तको जालो फैलाएका उनले ललितपुरको सुनाकोठीमा सिभिल होम्स–३ बनाउने भन्दै रकम असुलेका थिए । तर, उपभोक्तालाई रितपूर्वक परियोजना हस्तान्तरण नै गरेका थिएनन् । उल्टै, संरचनामा ताला लगाउने र दुःख दिने गरेका थिए ।
मङ्गलबार, १९ असोज, २०७८, बिहानको ०७:२८ बजे